စာဂလမ်း၊ ၄ရပ်​ကွက်​၊ ​တောင်​ဥက္ကလာ၊ 20'x60'၊ ​မြေ၊ ​ရေ၊မီတာ၊ အုတ်​ခတ်​၊ ဂရန်​အမည်​​ပေါက်​၊ ​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။...
​တောင်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​၊ 4ရပ်​ကွက်​၊ စာဂလမ်းတွင်​ ​ပေ 20'x60'၊ ​မြေ၊ ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8944165 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရူခငျးသာမွို့ပတျလမျးမပျေါ လုံးခငျြးအိမျ ရောငျးမညျ.
- နဈထပျခှဲအိမျ - အိပျခနျးလေးခနျး,ရခြေိုးခန...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8969968 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
👌👌covid ကာလ အထူးလြော့ဈေး နရောကောငျး​ရောငျးမညျ👌👌
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8996992 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကမာရှတျမွို့နယျ အခနျးကယျြ(၂)ခနျးတှဲ ကှနျဒိုအခနျးကဲ့သို့ရှယျပွငျဆငျပွီး တိုကျခနျး(ဘယျ/ညာ)ရောငျးရနျရှ...
လိပျစာ ကမာရှတျမွို့နယျ (၅)ရပျကှကျ ဆငျမလိုကျစြေးအနီး. ဖှဲ့စညျးမှ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8790453 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002319 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9002311 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်